Ye19th China International Nyama Yeindasitiri Exhibition-NEWS-Square Technology Boka Co, Ltd.
I19th China International Nyama Yekudyara Yekuratidzira
The 19th China International Meat Viwanda Exhibition inotambirwa neChina nyama yekudyidzana uye yepasi rose nyama sekirariat yakavhurika kwazvo muQingdao cosmopolitan kuratidzwa munaGunyana 15th , chiratidziro iyi hwindo rekuzviratidza pamberi penyika indasitiri yenyama pasi rese uye mukana usingawanzo kuwanikwa wekuita shamwari nyowani uye kutanga kubatana kutsva.
Nzvimbo yekuratidzira ingangoita 70000m² uye anopfuura 1000 emabhizinesi enyama kubva kumba nekune dzimwe nyika vakapinda muchiratidziro ichi.zviratidziro zvinogadzirwa zvinosanganisira Nyama nyowani, nyama yakagadzirirwa, nyama inokurumidza-chando, zvigadzirwa zve nyama zvakadzama, zvekushandisa zvekuuraya, zvigadzirwa zvekugadzirisa, zvekutakura, zvekutakura zvinhu, kutonhora keteni zvigadzirwa zvishandiso, chikafu chinosanganisa muchina uye kugadzirisa nzvimbo dzinotsigira, nezvimwe.
Square Technology Boka Co Ltd yakaunza yakananga kutyaira zononoka inokurumidza firiji, mhepo inotonhorera uye yakaomeswa pani kune ino exhibition.the dumba nhamba iri N6009 uye nzvimbo yedumba ndeye 108m².pakati pekuratidzira, nhamba yakakura yevatengi vatsva nevakuru vakashanyira dumba redu zvakateedzana avhareji zuva nezuva traffic vanhu vanhu 300 / zuva.vatengi vacho vanonyanya kubvunzwa pamusoro pekukurumidza kutonhodza zvigadzirwa zve nyama uye kuvaka kwekuchengetedza kunotonhora. vatengi' nzwisiso yezvigadzirwa zvedu uye nekuisa hwaro hweanogona kubatana.
Dare rekuratidzira rakabata mukana mukuru wekupa mubairo musi wa10 mangwanani, Gunyana 18th.ye yemafiriza efiriza akateedzana zvigadzirwa kubva ku Square Technology Group Co Ltd yakasarudzwa sechigadzirwa chakanyanya kunetsekana che2021 China International Meat Industry Exhibition ine zvibodzwa zve6054.
Kambani yedu yanga ichivavarira kukwana mumunda wekukurumidza kutonhodza kwemakumi matatu neshanu, ichishumira vanopfuura zviuru zvishanu zvevatengi, ichifukidza dzimba uye mhiri kwemakungwa, ichipa vatengi imwechete-yekumisa kutenga uye huwandu hweinjiniya masevhisi, uye vakazvipira kupa zvirinani mhando chando cheni michina mhinduro kune nyika.